Syk1224 4 Fanontam-pirinty miloko fanoratana maty miaraka amin'ny milina miangona
Ny singa elektrika lehibe dia mampifanaraka ny marika malaza rehetra. PLC mifehy, efijery mikasika ny loko, mpanova matetika.
Ny fitaovam-pandefasana dia mampiasa vy vy 40 Cr, 20GrMo Ti avo lenta izay nototoina, ary aorian'ny fikolokoloana hafanana, dia afaka hatramin'ny enina · Browse
★ Amin'ny fampiasana firafitra suction suction, mifanentana amin'ny tsindry mafy mahery. Suction amin'ny silencer., Loharanom-pahalalana ary fifantohana fanaraha-maso elektrika amin'ny kaontera fiasana iray ihany, lavitra ny motera dia tsy latsaky ny 1.5m, ny lafiny fiasa mihidy fonony feno.
★ manangana firafitry ny suction hood, mifanentana amin'ny mpankafy mahery vaika. mandatsa-dranomaso
kabinetra fanaraha-maso sy famatsiana herinaratra hifantoka amin'ny fiasa iray ihany,
nikatona ny fonony feno.
★ fanariana fasika faran'izay avo kalitao, matevina amin'ny rindrina 200mm。Adopt indepen · Browse
※ Fitaovana ara-drafitra: ★ manangana firafitry ny kapoka suction, mpankafy mahery setra avo lenta. Suction amin'ny fahanginana, famatsian-tsolika ary kabinetra fanaraha-maso herinaratra hifantoka amin'ny asa mitovy, tsy lavitra ny mpampiantrano dia tsy latsaky ny 1.5m. Boaty tsy miankina mahaleo tena, rafitra fandefasana iraisan'ny rehetra. ★ fitaovana mihosin-kodiarana mitazona vy 48CrMo, vy ny savaivony amin'ny rool ...
Facer tokana SF-405E
★ roller flute lehibe ： ￠ 405mm （araky ny fahasamihafan'ny sodina） roller roller pressure pressure pressure pressure pressure ， mm 400mm.
★ amin'ny fampiasana ny famolavolana tsindry ratsy, ny fanjifana ny hafanana ambany, dia manampy ny taratasy ifotony hanindry milina sy hanakaiky ny velaran'ny roller mihombo, & n · Browse ·
★ ambonin'ilay takelaka mafana dia mifampiraharaha amin'ny fikosoham-bilia, lovia mafana 600mmmm, stereotypes fanamafisana ny minisitry ny 5m.
★ takelaka mafana dia namboarina ho takelaka fitoeran-javatra, taratasy fanamarinana fitoeran-tseranana mihidy ary taratasy fanamarinana fanaraha-maso panels tontonana hafanana anatiny ho an'ny par · Browse
★ Fanamafisana ny takelaka fanafanana amin'ny alàlan'ny fikolokoloana fitsaboana, fatra hafanana 600mm.
★ Preheat board dia vita amin'ny takelaka fitoeran-jiro, mifanaraka amin'ny fenitra nasionalin'ny fitoeran-tsindry, mihidy ny taratasy fanamarinana fitoeran-tseranana sy ny fitsirihana
★ Fanamafisana ny takelaka fanafanana amin'ny alàlan'ny fikolokoloana fitsaboana, sakan'ny lovia mafana 600mm, takelaka fanamainana 12 sy fampangatsiahana 4 m.
★ takelaka fanafanana miaraka amina famokarana takelaka fitoeran-javatra, mifanaraka amin'ny firenena
fenitra ho an'ny sambo fanerena kilasy, miaraka amin'ny sambo fanerena